Xog: Xarunta Wasaaradda Amniga oo Albaabadda la isugu dhuftay iyo Shaqaalihii oo la kala diray – Hornafrik Media Network
Xog: Xarunta Wasaaradda Amniga oo Albaabadda la isugu dhuftay iyo Shaqaalihii oo la kala diray
Xarunta Wasaaradda Amniga ee Dawladda Somalia oo daganayd Dhisme KMG ah oo ku yaalay Degmadda Shingaani ayaa loo xiray Sababo Amni, iyadoona gabi ahaanba la kala diray Shaqaalihii Wasaaradda Amniga. Waxaana Wasiirka Amniga tan iyo markii la magacaabay uu ku shaqeeyaa Gurigiisa, isagoo aan maalina fariisan Xafiis.
Xog ay heshay Hornafrik ayaa sheegaysa in 05/04 ee Sannadkan markii uu Qarax ka dhacay Agagaarka Wasaaradda Amniga wixii ka dambeeyay la kala diray Shaqaalaha Wasaaradda Amniga, isla markaana lagu wargaliyay inay guryahooda iska joogaan illaa amar dambe. Waxaana Shaqaalaha Wasaaradda Amniga ay hadda noqdeen kuwo aan lahayn Xafiisyo iyo goobo ay ku shaqeeyaan.
Qaar ka mida Shaqaalaha Wasaaradda oo codsaday inaan Magacooda loo isticmaalin Warbaahinta ayaa hornafrik u sheegay inay u muuqato in gabi ahaanba la baabi’iyay Wasaaraddii Amniga Somalia, Isla markaana ay ka wal walsan yihiin in Mushaaraadkana laga jarto. Waxayna intaa ku dareen in Miisaaniyaddii loogu talagalay Shaqadda Xafiisyadda uu Wasiirka Amniga isaga qaato Gurigiisa. iyadoo aysan jirin cid kala xisaabtanta.
Wasiirka Amniga Qaranka oo dhawaan loo magacaabay Ganacsade ku cusub Hawlaha Amniga ayaa tan iyo magacaabistiisii kadib waxa uu ku shaqaynayay Gurigiisa, isagoo sidoo kale iska xiray Xafiis ay Wasaaradda Amnigu ku lahayd Xarunta Nabadsugidda ee Maamo Khadiijo.
Wasaaradda Amiga Somalia ayaa ka mid ahayd Wasaaradda ugu Shaqadda iyo Mashaariicda badan Dawladda Somalia.
Pakistan oo Dil lagu xukumay Nin Masjid ku dhex dhuusay.